Iyi ndiyo misiyano pakati pevasikana veChinese neJapan Absolut Kufamba
Maka misiyano, kufanana kana kukanganisa Icho chinosemesa asi chiri chevanhu zvekuti hazvigone kutiza. Chero mufambi anofamba America anopedzisira ataura nezve izvo maChileans, maArgentina, maCuba kana maAmerican vakaita.
Izvi zvinoitika kana munhu achifamba kuEurope uye zvakare kana achishanyira Asia. Iyo jogirafi uye nhoroondo yenyika yega yega inogadzira idiosyncrasy yevanhu vayo, saka kana uchifunga masimba akadai se China neJapan Tiri kushamisika Ndeupi musiyano uripo pakati pevasikana veChinese neJapan?
1 China neJapan
2 Chinese vakadzi
3 Misiyano pakati pevasikana veChinese neJapan
China haisi nyika yekuwedzera. Izvo hazvina kunyanya kuita bellicose. Uri kufunga nezveTibet here? Hongu, asi chaive chikamu chenharaunda yavo nguva refu isati yasvika yeEuropean incursion, saka pane gakava refu ipapo.
Zvandiri kureva ndezvekuti maChinese vanhu vanhu-vanotarisa-navel, sekutaura. Nyika yekunze haina kufarira zvakawanda uye kutaurirana kwavo kwave kushoma, kufarira, uye kazhinji kuchimanikidzwa nemasimba asina kugadzikana eOld Europe.
Ini ndinogara ndichifungidzira kuti Marco Polo uye vanotevera vafambi vekuEurope vanofanirwa kunge vakanzwa kana kufunga pavakagumburwa nekuyevedza uye chimiro chedare reumambo reChinese. Chishamiso chakadii! Zvinenge sekuenda kune imwe nyika.
Japan, pane kudaro, semunhu anozvitutumadza, akagara akaisa meso ake pamusoro pegungwa uye ave kuda kupfuura. Ivo vanhu vane simba, kunyangwe nhasi akadzikama kwazvo, uye munhoroondo yese akagara uye akakunda kanopfuura kamwechete Korea uye yakatora umambo hwakazopedzisira hwave maJapan Okinawa.
Tsika dzechiChinese ndezvekare uye zvakapfuma zvekuti zvakaguma zvichikurudzira nekuumba tsika dzevavakidzani vayo. Ivo vese vakateedzera kubva kwaari ndosaka ari kanji MaJapan ndiwo maChina ideograms, kungopa muenzaniso.
Sezvandambotaura kare, jogirafi uye nhoroondo zvinoumba vanhu. Vakadzi veChinese vakaona hupenyu hwavo huchichinja pamusoro pemazana emakore asi zvakanyanya ivo vakaita shanduko hombe uye dzakanakisa panguva yekupedzisira makore eDynasty Qing, Hondo Yavose uye apo maKomonisiti akakunda uye People's Republic of China yakavambwa.
Kunyangwe zvese izvi, kuroora uye kubereka zvinoramba zviri chikamu chakakosha muhupenyu hwevakadzi. Michato yakarongwa yaive mutemo pamberi pechimurenga uye zvaive zvakadaro kubva pamutemo wa1950 uyo hurumende yakaedza kushandura kuzviisa pasi kwevakadzi kurambidza varongo, bigamy uye barika, semuenzaniso.
Ipapo kwakauya iyo Mutemo Wevana Chete, mumakore makumi manomwe. Ehezve, kwagara kuripo, kune uye uye pachave nemisiyano pakati pemaruwa nemaguta.
Nhasi, takabatana neruzivo «Imwe nyika, maviri masystem«, Vakadzi vechiChinese vanogara mumaguta vakafanana zvikuru nevakadzi vekuMadokero asi zvakadaro ivo havana kukwanisa kupukunyuka kubva kumhuri mvumo yevana neyemhuri uye vanotarisana nemabasa maviri aya sevamwe vakadzi vepasi mune nyika yemadzitateguru.
Mamiriro evakadzi muJapan anga asina kunyanya kusiyana. Vakadzi vechiJapan vave vachizviisa pasi pevabereki kudzora hupenyu hwavo hwese. Uye kana pakanga pasina baba, izvo zvehama. Michato yakarongwa yaive yakajairika uye mamiriro, sekuChina, yakangochinja muzana ramakore rechiXNUMX uye kunyanya nekutora kweAmerica mushure mehondo yechipiri.
Asi kunyangwe Japan iri nyika yakabudirira, pano vakadzi ivo vanoramba vachibhadharisa zvishoma pane varume pamabasa mamwe chetewo. Kunyangwe mutemo wemwana mumwe usingavaremedze, mari dzekutsigira vana dzakakwira zvakanyanya zvekuti vanongova nemwana mumwe kana vaviri uye mazuva emaawa masere ekushanda anowedzerwa kusvika gumi kana gumi nembiri.
Mumwe murume wechiJapan anotarisira kuzvininipisa, kumwe kunyara, ruremekedzo kubva kuvakadzi vake uye kuti anotarisira mabasa epamba. Zvizvarwa zvidiki hazvitevere izvi zvakanyanyisa asi ndechimwe chinhu icho chichiri kuonekwa.
Handingataure kuti vasikana vechiJapane mageisha ese, ndicho chifananidzo chekuMadokero, asi mukati memikova uye kuongororwa kwemagariro kuburikidza pano chinhu chimwe chete chinoitika senyika dzese. Takabva kure, vasikana, asi kuchine ...
Kutanga, inofanira kujekeswa kuti iyi runyorwa haina kuitirwa kuti igumbure chero munhu. Izvo zvakajairika nekuti zvakaoma kutaura nezve nzanga iwe usiri nhengo yayo. Iyi mibvunzo yatichataura nezvayo ikozvino zvakavakirwa pakucherechedzwa kwevanhu, makomendi, zvisirizvo, maonero echiChinese, maJapan nevatorwa. Saka ndapota usatsamwa.
Nzvimbo yakanaka yekutanga kana ibwe rekubata rekugadzira runyorwa rwe mutsauko uye fanano nhoroondo yezvematongerwo enyika: iyo Chinese Revolution yakachinja zvakanyanya basa revakadzi veChinese munharaunda. Pamutemo, vaitora kubva pane imwe nguva kuenda kune imwe chinzvimbo chakafanana sevarume uye izvo zvaive zvakakosha.
Kune rimwe divi, Japan rakakurumidza kushandurwa kuita simba remaindasitiri futi kuti vakadzi veJapan vakaziva kwemakumi emakore kuti vanogara mune rimwe remasimba makuru eAsia. Nekunze vane moyo munyoro, vakanyarara uye vane vakadzi vanonyara, asi zvinokwana kurarama zvishoma munyika kuti vawane vatori venhau, vezvematongerwo enyika, maartist uye vakadzi vanoshanda mumigwagwa, vasina kunyarara zvachose.
Vasikana vekuJapan vanowanzo roora vakomana vezera ravoMushure mekupedza yunivhesiti, uye pamwe chete vanotanga hupenyu hwekushanda, vaine vana vashoma uye nesimba rakawanda. Vaviri vacho vakakosha uye ndizvo zvakaitawo basa. Kunyangwe paine michato yakavhenganiswa, haisi iyo yakajairika. Vokune dzimwe nyika vanogona kuda kuziva asi kashoma kuti vasarudze mumwe wekuroora.
MuChina, zvinopesana ichokwadi. Vazhinji vanodaro Kana mukadzi wechiChinese aine mukana wekuroora mutorwa, icho chinhu chaanoshandisa. Ivo vane hukama hwepedyo nevatezvara vavo uye vamwene vanoenderera mberi nekutakura huremu husingadiwe muwanano.
Mazuva ano, kune zvakawanda zvekutengesa, hapana mashoma nhau anoratidza izvo vanowedzera uye vasikana vechiChinese vanosarudza kuroorwa nevarume vakuru uye vakapfuma, pane zvakaenzana nevanhu vezera rake. Kuomerera kwevabereki vake pamari nekuchengetedzeka kwemari kwakasimba.
Pano ndinozvionera wega nekuti ndine shamwari yechiChinese: hanzvadzi yakaroora nyanzvi yemagetsi uye havana kumuda zvachose nekuti anga asina uye aisazove nemari yakakwana. Imwe hanzvadzi yakaroora maneja wekambani yeAmerica uye ivo havana kuisa asi. Chero zvavanotaura, mari ku maChina vanofarira kwazvo.
Ndeupi mutsauko watingawana ipapo pakati pevasikana veChinese neJapan? Ndinokukoka iwe kuseka uye kufunga pamwe chete:
Vakadzi vechiChinese vanovenga vamwene vavo ivo vasikana vechiJapan vachivaona saamai vavo vechipiri
Vakadzi vechiChinese vane zvakajairika pamubhedha nepo vakadzi vechiJapan vachishingaira.
Vakadzi vechiChinese vanohukura varume vavo pavanodzoka kumba vanonoka ivo vasikana vechiJapan vachinyatsonzwisisa, kunyangwe dzimwe nguva vasingauye kubva kubasa asi kubva kubhawa kwavanobvisa kusagadzikana pabasa.
Vakadzi vechiChinese vanobvuma uye vanotsvaga kuroorwa nevatorwa apo vasikana vechiJapan vanouya kuzozviona seinonyadzisa.
Vakadzi vechidiki vechiChinese vanosarudza varume vakuru, vatosimbiswa uye vakapfuma, kuti varoorwe. Vasikana vekuJapan vanowanzo danana nemumwe munhu wezera ravo.
Vanamai vechiJapan vanodzidzisa vanasikana vavo kuti vawane murume uye kurondedzera zvakanaka kune vatezvara ukuwo vanaChinese vanaamai vachimanikidza vanasikana vavo kutonga zvemhuri uye zvemurume.
Vakadzi vechiJapan vanogona kushivirira murume asina mari asi ivo havabatane nemagwara kana vasina simba. The Chinese in reverse.
Vakadzi vechiJapan vanoita sevanoregeredza nekusatendeka kweumwe wavo nepo vakadzi vechiChinese vachinyatsoita zvavo. Muchokwadi, muChina nyaya dzekunze kwevakadzi ndedzekurongeka kwezuva.
Kuti ndipedze zvinofanirwa kutaurwa izvozvo vakadzi vese varwi, ivo vanoziva mabatsiro emhuri dzavo uye munhoroondo vakagara nguva dzakaoma, dzehondo nenzara. Vakaona varume vavo vachienda kunorwa kwete kudzoka kana kudzoka vakarasika, vabuda vega kunoshanda maawa marefu uye nanhasi, sezvinoitika kumadzimai ese epasirese, havazivi basa rakapetwa rinoreva kuva nemhuri uye basa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Misiyano pakati pevasikana veChinese neJapan
Jose Juan akadaro
Iyi posvo inhema dzizere, kufungidzira uye kushomeka kukuru kwekuremekedza.
Kana uine zvigunwe zviviri zvepamberi, iwe uchazvibvisa ipapo ipapo.
Ivo chete vasingazive China nemaChinese ndivo vanogona kupokana zvisina maturo zvakadaro.
Kunyanya, aya atinawo
tinofara kugovana hupenyu hwedu nemukadzi wechiChinese kana wechiTaiwanatinoziva wekunyepa kuzere kwenyaya idzi dzisina kunaka.
Iwe unoita zvishoma kufarira kune yako blog nekubvumira iyo kuti ibudiswe.
Pindura kuna Jose Juan
Mhoroi, matauriro epositi haagumbure. Iyo rondedzero yanga ichitenderera paChinese webhusaiti kwenguva yakareba uye inosetsa, hapana chakakomba. Generalizations senge izvi zviripo pasirese uyezve ivo vanowanzo kuve vanoreva nhema kupfuura chokwadi, asi handicho chikonzero nei mumwe achirega kuseka nezvazvo. Wakafadza mumwe wako anofara.
Ini ndinobvumirana neBlog, ndanga ndichigara kuChina kwemakore matatu uye mazhinji acho akadaro !!! Kana iwe wakaroora mukadzi weTaiwanese, usamutenge iye nevakadzi veChinese vePeople's Republic, anonzwa kugumbuka uye nechikonzero chakanaka!
Icho ichokwadi sezvachiri chenhema, ini ndaive nevakadzi vaviri vechiChinese saka ndinoziva, zvese zvaakataura ichokwadi, chete kuti havasi vese vakadaro, mune yangu nyaya ivo vese vaive vakaroora uye vaigona kutaura nemurume ivo vakaita hukama neni, saka kusavimbika chinhu chechokwadi, asi zvisinei handitendi kuti vese vakaita sekudaro asi vazhinji vacho vakadaro.
Mhoroi, ini ndiri kuChina uye kuti ndinogona kukuudza kuti kwandiri vazhinji vavo, kana vakadaro, vanongova nehanya nemari, ndine shamwari dzakadya kudya kwemanheru nevamwe vavo uye dzakavarasa nekuda kwavo, ivo dzakatangwa zvakanyanya uye kana varume vacho vari vatorwa uffff vakaita semumhanzi wenzeve dzako, chinhu chete chatingaite kutarisira hukama hwedu
Dai Japan yaive yakakura kwazvo, hafu yevanhu yaizoenda kunogara imomo, handiti? zvinoita kwandiri
hahaha zvinosekesa izvo nekuda kwekuseka nevanhu zvakanaka. Kuti uve chirevo chakakomba chokwadi kuti zvese manyepo.
MaChinese nemaKorea vakasarudzika zvakanyanya kupfuura maJapan, zviri nyore kwazvo kuona maJapan akaroora mutorwa kupfuura wechiChinese kana wechiKorea, tsika yechiJapan yakavhurika, ndinoziva nekuti ndaive nemusikana wekuKorea uye Ini ndinodzidza mutauro wechiJapan, ndosaka ndichitaurirana zvakanyanya navo uye gore rakapera ndaive muTokyo kwemwedzi.
Uye iyo turkey yakanyora iyi benzi kutaura, ndeyeSpanish here, kana ndiye posh ziya? Chinhu choga chandinoziva ndechekuti, munyika mangu, vekuSpanish vanodzima moto vanochiva kwazvo vakadzi veAsia, vaiita kunge vanofa negodo ini aifamba nemumwe, uye pandinenge ndiine musikana wangu wekuPhilippines, vamwe vakadzi veSpanish vanoita kunge vanofenda.
NYAYA IYI CHIKABU CHITENDERO CHECHIVO, BHOGU YANGU YAKANAKA ZVAKANAKA PASI IYI, ASI NDINOZIVA ZVANDINONYORA.
Ini ndinobvumirana zvachose neiyi blog, ini ndine maChinese, maJapan uye maKorea shamwari. Kazhinji, vakadzi vechiJapan neveKorea vakasarudzika uye vakatendeka, asi vakadzi veChinese zvimwe zvinhu, vanofarira varume vekunze asi pamusoro pemari yavo yese.
Peter zapatol akadaro
Kwandiri akanakisa maKorea ndiwo akanakisa, achiremekedza maChinese nemaJapanese, ini ndakaroora kune akanaka mumwe wavo uye anonditsigira.
Pindura kuna Peter zapatol
Zvinotaridza kuti mumwe mukadzi wechiChinese akaita chimwe chinhu kwaari, sekutora mukomana, kana chimwe chinhu chinotyisa ... nekuti zvinoratidza huturu kuvakadzi vechiChinese. Tichifunga nezvekuti vakadzi vechiJapane zvakare vane zvakawanda zvinokanganisa (ohh kushamisika !!… kunge anenge munhu wese),. Kutaura chokwadi, maAsia zvakawandisa zvinoita kunge zvepamusoro-soro mumakoni avo erunako, zvinoita sekunge zvese zvinoitirwa vasikana vadiki vari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika makumi maviri nemashanu. Nekuda kweizvozvo, vakadzi vanonyangarika sei ... ndinofunga ndosaka vachitora dambudziko rakawanda mukutarisa nekuita sevasikana kunyangwe vanga vasina kwenguva yakareba. kutaura zvazviri, kune vakadzi vane makore vari mukuyedza kuyedza kuita sevasikana vari muma15s.
Kune huchenjeri hwakawanda mumataundi iwayo, asi hukuru hwakawanda zvakare…. sevose.
Pindura kuna lorena0007
Ini handina kuzvitenda pandakaona kuti izvi zvakanyorwa nemukadzi ... Chaiyeiye ari kufambira mberi uye anoburitsa bile kubva mumuromo wake pakutanga kwekuchinja. Kana pakupedzisira iwe unenge uine yekumadokero yakaoma uye zvese, hahaha. Uye kupindura iyo yekutanga inokanganisa chirevo (nechikonzero chakanaka) ichiti haisi joko rinosemesa ... Zvinosemesa, zvinonyadzisa sei vamwe vakadzi kuzviitira. Wobva warwa kuti vasakubata sezvidimbu zvenyama. Aya mazwi angangodaro asina kuburitswa, chero bedzi achishandira munyori aine zvishoma kuratidza, zvakaringana kwandiri. Atte: Machirulo.
?? Zvakanaka, zvinoratidza kuti iwe uri kudivi revaJapan. Kuranga? Mageneti akanaka? ??. Hongu, rarama kwenguva refu Japan !!! Urarame nyika iri kuzivisa hondo kune dzimwe nyika !!! Rarama kwenguva refu nyika isina kuzadzikiswa kodzero zhinji dzevanhu! Rarama hupenyu hwakanakisa nyika ine yakanakisa nzanga, umo kubatsira vamwe kushoma (handisi kuti hazviitike, asi ngazviitwe…) !!! Rarama kwenguva refu tsananguro dzako huru uye nharo nezve maJapan!
Mumwe mubvunzo, iwe uchaenda rinhi kushanyira Japan, kana iwe wakatozviita? Nekuti ivo vanokugamuchira iwe kekutanga nguva yemazwi makuru iwe aunotsaura kwavari. Mageneti akanaka, nekuranga kukuru uye nemanzwiro ekubatsira vamwe pasina kuzeza… HA! Izvo hautendi kunyange iwe. Mukomana, handizive kuti pa internet wawana kupi iyo mhando yedata kana kuti ndeapi mabhuku awakadzidza mairi. Kana uchikwanisa, ndipindure kuti ndaverenga (uye ichi hachisi kuseka, nekuti ini ndichavaverenga kana iwe ukandiudza, hongu, pasina kuseka) uye tichaona kana maonero emaJapan achinja.
Unoziva? Ndasvika pamhedziso yekuti munyika mune vanhu vazhinji kwazvo vanodzivirira maJapan asi vanenge vasingambove maChinese. Vanotaura zvakaipa nezvevakadzi vechiChinese, asi vemaKorea, maTaiwanese, nezvimwewo, havana matambudziko (vanenge vasina kumbotaurwa zvakaipa nezvazvo). Vakadzi vechiJapan vakadzi vakanaka vemba, vanaamai vakanaka… asi vakadzi vechiChinese vakaipa. Wese munhu munhu, uye munhu wese anogona kuve akanaka kana akaipa, asi pakati peChinese neJapan pane misiyano asi munharaunda yemhuri, mutsauko hauna kunyanya.
Ah! Iwe hauna kutaura chinhu chekupindura kana kupindura, asi kwete nekuti iwe unodaro ndizvo zvandichaita. Kana makomendi ako asina hwaro, ini handifanire kuramba ndakanyarara uye ndisadzivirire zvandinofunga. Kune mutemo unodzivirira rusununguko rwekutaura uye mumwe mutemo unodzivirira kushivirira kwevanhu vakasiyana.
Mhoro Miguel, mumwe wangu muJapan… uye hongu, ndicho chinhu chakanakisa chakaitika kwandiri muhupenyu hwangu ……… .rondedzero yacho inobvumirana nemaonero angu emusikana wangu …… hongu… ivo vakanyanya kunaka kwazvo!
Unopenga. Chaive chinyorwa che generalizations chisina kukosha. Sara mushe.
Gervasio Bib akadaro
Jose Juan Majete, makore manomwe apfuura kubva zvawakatumira, ndinofunga unenge watoona kare kuti mukadzi wako wechiChinese akazviisa sei kunyangwe nebutanero uye akarisimudza kubva kumashure nekumberi nekwaunogara kwese uye kunyangwe shamwari yako yepamwoyo yaisa iye akatarisa kuMecca.
Saka kana wawana huchenjeri hushoma ndinofunga watorambana.
Uye kune yako inotevera positi iwe unozoziva zvishoma nezve zvatiri kutaura nezvazvo.
Pindura Gervasio Bib
Ini handibvumirane nemabasa echikadzi, icho chinhu chekare, ini ndiri wedzinza reJapan uye tomboy uye murume wangu anondida.
Hupenyu hwangu hwese ndakatsvaga musikana wekunyika yeAsia, kusvika nhasi handina kubudirira. Kungovaona kunoita kuti ndinetseke, ndinovada chaizvo handizive kuti sei. Ini ndinoda chaizvo kunzwa izwi remukadzi wechiChinese, kunyangwe ndikasamunzwisisa, ndinofarira zvese nezvavo. Ndinovada.
Hunhu hwekusunungurwa kweColombia